Sababahaan ayay sheegeen raggu in aysan u jeclayn isticmaalka cinjirka galmadda | Raganimo University
Sababahaan ayay sheegeen raggu in aysan u jeclayn isticmaalka cinjirka galmadda
February 17, 20192 minutes
Ragg badan ayaan jecleyn isticmaalka cinjirka galmada, iyagoo qaasatan ragga Soomaalidu ay yihiin kuwa ugu isticmaalka yar aduunka. Raggu sababo kala duwan ayay uga soo horjeedaan isticmaalka cinjirka. Qaar ayaa sheega in uu dareenka raaxada hoos u dhigo halka qaar kale ay sheegaan in dumarka dartood aysan u isticmaali karin iyo arimo kale.
Raaxada ayuu hoos u dhigaa
Hore ayaan mowduuc uga qornay sida uu yahay dareenka raaxada marka la isticmaalayo cinjirka galmada, iyadoo aan ku soo gunaanadnay in horumar weyn laga sameeyay farsamada cinjirka, isla markaana ay kuwa cusub leeyihiin tayo fiican oo ay aad qafiif u yihiin, hadana aysan u dhigmid marka jirka dabiiciga ah istaabto. Balse uusan wax badan ka badalin raaxada dareenka. Iyadoo la ogyahay in kacsiga iyo raaxada qeybta ugu weyn ay tahay maskaxda iyo dareenka soo jiidashada ee ka dhexeeya lamaanaha.
Hadaba marka la eego faa'iidada uu leeyahay iska ilaalinta uurka iyo cudurada ayaa la dhihi karaa in aysan jawaabtaan sidaa muhiim u ahayn.
Dumarka ayaan ogolayn
Sidaa waxaa yiraahda ragg badan oo Soomaali ah, oo markii la waydiiyo sababta aysan u isticmaalin cinjirka sheega in xaaskooda ay la dagaalamayso haddii ay cinjirka soo bandhigaan. Qaar ayaa xitaa sheegay in xaaskooda ay isku malaynayso "dhilo" haddii cinjirka loogu galmoodo. Arintaan ayaa ah mid yaab leh, maadaama faa'iidada cinjirka uu muhiimada ugu weyn u leedahay dumarka. Dumarka Soomaalidu dhib badan ayay ku qabaan caruurta xiriirka ah, iyagoo xitaa aan awoodin in la raaco sunadihii nabiga (nnkh) ee ahayd in caruurta 2 sano loo dhaxaysiiyo.
Waxaa hubaal ah in haddii ninka iyo xaaskiisa ay ka dhaxayso kalsooni iyo wada-hadal furan in arintaan la isla fahmi karo. Oo haddii la isku raaco in caruurta 2-sano loo dhaxaysiiyo aysan ka hor imaanayn isticmaalka cinjirka oo la ogyahay in uu ka fiicanyahay kaniiniga ay gabadhu cunayso oo dumarka qaar ay ku xanuunsadaan isla markaana ka qatar badan cinjirka.
Diinta ayaa ka soo horjeeda
Jawaabtaan waxaa bixiya ragga qaar, inkastoo ay yartahay tiradooda. Maadaama cinjirku uu yahay aalad, qofkastana sida uu u isticmaalo ayaa ilaahay kula xisaabtamayaa. Waxay ku doodaan ragga qaarkood in fisqiga uu siyaadiyo. Taasi run ayay noqon kartaa haddii labo qof oo aan is-qabin ay isagu galmoodaan balse diintu ma waxay xaaraan ka dhigtay in ninka iyo xaaskiisu ay isticmaalaan? In dadka is-qaba ay isticmaalaan cinjirka galmada xaaraan ma ahan sidaa ayay sheegeen culumada.